Wasiirka kalluumaysiga Puntland & waftigiisii oo kulamo la leh qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Cayn. – Radio Daljir
Buuhoodle, Mar 28 ? Wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee dawladda Puntland Eng. Maxamed Faarax Aadan ayaa magaalada Buuhoodle ka bilaabay kulamo uu la yeelanayo bulshada gobolka Cayn.
Wasiirka, oo wafti uu hoggaaminayo ay shalay gaareen magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Caynt, ayaa kulama is dabajoog ah la leh qayabaha kala duwan ee bulshada gobolka Cayn, kuwaasi oo ku saabsan taabbagalinta maamulka iyo taynta arrimaha bulshada.
Kulamada oo dhammaantood ah kuwo aad u xasaasi ah, ayaa lagu gorfayndoonaa sidii loo xoojin lahaa maamulka gobolka Cayn iyo midka degmada Buuhoodle, iyadoo sidoo kalana ay jiraan qorshayaal la doonayo in lagu dardargaliyo ciidamada ammaanka ee ka hawlgala gobolka Cayn.
Waxyaabaha sida weyn diiradda loo saari doono waxaa ka mid ah, sidii loo dardargalin lahaa qaadista canshuuraha, si markaasi u soo kobco dhaqaalaga maamulka dawladda hoose ee magaalada Buuhoodle, xalna ay ugu helaan maaraynta baahiyaadka daruuriga ah, waxaana dhanka maamulka gobolka iyana ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee xaggooda looga hadli doono xoojinta ciidamada iyo xakamaynta xudduudaha gobolka.
Inta waftiga wasiirku ay joogaan magaalada Buuhoodle, waxaa sidoo kale la isla meeldhigi doonaa tayaynta arrimaha bulshada, sida caafimaadka, waxbarashada iyo sidoo kale ka shaqeynta nadaafadda iyo bilicda magaalada.
Kulamadaan oo maanta si rasmi ah u bilawday, ayaa lagu wadaa muddo in ay qaataan waxaana sidoo kale la filayaa mas?uuliyiin kale oo reer Puntland kana soo jeeda gobolka Cayn in ay halkaasi gaaraan maalmaha soo socda.
Waftiga wasiirka Kalluumayga Eng. Maxamed Faarax Aadan, markii ay shalay gareen magaalada Buuhoodle waxaa halkaasi ka dhacay bannaanbax aad u ballaaran oo boqolaal dadweyne ahi ay ka soo qaybgaleen kaas oo lagu soo dhaweynayey waftigiisa dhanka kalana si weyn loogu taageerayey maamulka Puntland.